Izindaba - USNOPE ubambe umhlangano waminyaka yonke wokubungaza UNYAKA OMUSHA ngomhlaka 29, JAN.
USNOPE ubambe umhlangano waminyaka yonke wokubungaza UNYAKA OMUSHA ngomhlaka 29, JAN.
Kuza Eholidini LONYAKA OMUSHA, uSNOPE ubambe umhlangano waminyaka yonke wokuligubha nabo bonke abasebenzi. Umphathi jikelele wenze isifinyezo sokwenza konyaka odlule futhi wancoma abasebenzi abasebenzayo. Imiklomelo ehlukahlukene yethulwe “njengomklomelo womsebenzi ohamba phambili” “Umklomelo womnikelo ovelele” ”umklomelo wokuthengisa okuhamba phambili”… Imenenja jikelele ichaze ngomkhombandlela womsebenzi ngo-2021. Qinisa ukuqeqeshwa kwabasebenzi, wandise imizamo emisha yokuthuthukisa umkhiqizo, ikakhulukazi kumaphrojekthi wamakhasimende abalulekile ukuze axhase izinqubomgomo.
Ukudonswa kwenhlanhla okuthokozisayo kwenze iqembu lonke lavuthwa. Ikhorasi "kusasa kuzoba ngcono" ikulethela isiqalo esihle, uzwakalise izifiso ezinhle zabasebenzi beSNOPE ngekusasa lenkampani. UNksz Feng Chen, umqondisi wenkampani, wayedakwe yisimo sakhe somdanso esimnene; UMnu Yu Zhou, umphathi jikelele, usigqugquzele ukuthi sikhumbule iminyaka enzima edlule; iculo lomlingo elithi "i-apula elincane" eladlalwa ngabantu besifazane benkampani lalithandwa kakhulu; imidlalo yokusebenzisana phakathi kwabasebenzi yayinempilo kakhulu phakathi nohlelo; Imisebenzi emine yenhlanhla nemiklomelo engu-19 yaphoqa isimo somhlangano waminyaka yonke ukuba sifike kuvuthondaba, futhi umklomelo wokugcina we-iPhone 12 ekugcineni wawela ezandleni zomphathi wezokumaketha uYang Zheng. Esidlweni sakusihlwa sonyaka omusha, bonke abasebenzi baphakamise izingilazi zabo ukugubha unyaka omusha futhi banethemba lokuthi ikusasa leSNOPE lizoba ngcono.
Umhlangano waminyaka yonke wafinyelela esiphethweni esiyimpumelelo esimweni sokuzwana, esifudumele, esinentshisekelo futhi esijabulisayo, okukhombisa umoya onamandla, omuhle, wobumbano nobumbene wabasebenzi. Uma sibheka emuva ku-2020, senza imizamo ebumbene, sisebenza kanzima, futhi sizuza ndawonye; sibheke phambili ku-2021, sinomgomo ofanayo, sigcwele ukuzethemba, futhi ngokuhlanganyela silindele ukuthi ikusasa le-SNOPE lizoqhakaza kakhulu.